‘ए’ डिभिजन लिगका १२ औं चरणका खेलहरु सकिंदै, हिमालयन शेर्पा र जावलाखेल युथ भिड्दै – Halkhabar kura
२९ माघ २०७६, बुधबार १०:२२
१२ औं चरणको खेलसम्म यी दुई टोलीबिच १ अंकको मात्रै अन्तर छ । २९ अंक जोडेको आर्मी क्लब शीर्ष स्थानमा छ भने २८ अंकसहित मच्छिन्द्र दोस्रो स्थानमा छ ।
उपाधि जित्न अन्तिम खेलमा मच्छिन्द्रलाई जित चाहिन्छ भने आर्मी क्लबलाई बराबरी भए पुग्नेछ । उपाधि जसले जितेपनि नेपाली लिगको ईतिहासमा नयाँ च्याम्पियन थपिने निश्चित छ ।
आर्मी र मच्छिन्द्रले अहिलेसम्म ए डिभिजन लिगको उापधि जित्न सकेका छैनन् । १४ टोली सहभागी यो वर्षको ए डिभिजन लिगबाट सरस्वती युथ क्लब रेलिगेशनमा परिसकेको छ ।
योपनि पढ्नुस, फुटबलको उपाधि छिनोफानो त्रिभुवन आर्मी क्लब र मच्छिन्द्र क्लबबीच फागुन ३ गते शनिबार हुने जारी लिगको अन्तिम खेलबाटै टुंगो लाग्ने भएको छ ।
आर्मी ३–० ब्रिगेड ब्वाइज: लिगको १२औं खेलमा ब्रिगेड ब्वाइज क्लब (बीबीसी) लाई ३–० ले हराउँदै आर्मी शीर्ष स्थानमा पुग्न सफल भएको हो । मंगलबार एन्फा कम्प्लेक्स सातदोबाटोको मैदानमा भएको खेलमा आर्मीलाई जिताउन कप्तान भरत खवास, विकास तामाङ र टेकबहादुर बुढाथोकीले एकरएक गोल गरे ।
भरतको ५० गोल पूरा: योसँगै भरतले ‘ए’ डिभिजन लिगमा व्यक्तिगत ५० गोल पूरा गरेका छन् ।
आर्मीको २९ अंक: जितसँगै अन्तिम खेल खेल्नुअघि पहिलोपटक उपाधि जितनजिक पुगेको आर्मीको २९ अंक भएको छ । दोस्रो स्थानको मच्छिन्द्र क्लबको २८ अंक छ ।
मनाङ २–० पुलिस: तेस्रो स्थानको साविक विजेता मनाङ–मर्स्याङ्दी क्लबको २५ अंक भएको छ । मनाङले मंगलबारको खेलमा नेपाल पुलिस क्लबमाथि २–० को जित हासिल गर्‍यो ।
मनाङका लागि विमल राना र अञ्जन विष्टले एकरएक गोल गरे । पुलिसका विशाल बस्नेतले खेलको अन्त्यतिर रातो कार्ड खाए ।
थ्रीस्टार १–० एनआरटी: थ्रीस्टार क्लब भने २३ अंकसहित चौथो स्थानमा छ । थ्रीस्टारले मंगलबार भएको खेलमा न्यूरोड टिम ९एनआरटी०लाई १–० ले हरायो ।
थ्रीस्टारका लागि दीपक घलेले ७७औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरे ।
मनाङलाई दोस्रो हुने अवसर कायमै: आफ्नो अन्तिम खेलमा मनाङले जावलाखेल युथ क्लबसित र थ्रीस्टारले च्यासल युथ क्लबसित फागुन २ गते खेल्नेछ । यदि, आर्मीले मच्छिन्द्रलाई हरायो भने र मनाङले पनि फराकिलो जित निकालेमात्र मनाङ उपविजेता बन्न सक्नेछ । यदि, मनाङ पराजित हुँदा थ्रीस्टार विजयी भए तेस्रो स्थानमा थ्रीस्टार रहने छ ।
१४ टोली सहभागी लिगबाट सरस्वती युथ क्लब ‘रेलिगेसन’मा परिसकेको छ ।
Previous क्रिकेट खेलाडीले प्रतिखेल खेले बापत पाँच हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने
बालोन डी’ओर लेवान्डोस्कीलाई ! ‘लिक’ भएको सूचिमा कुन खेलाडि कति नम्बरमा ?
११ कार्तिक २०७८, बिहीबार १३:०८
अल्मुताइरी अझै तीन वर्ष नेपाली फुटबलको प्रशिक्षक रहन सहमत
१० कार्तिक २०७८, बुधबार १६:३४